Paris Saint-Germain Oo Qorsheeneysa In Wadada Ay U Gasho Kooxda Chelsea Si Ay Kaga Afduubato Saxiixa Macalinkii Hore Barcelona Ee Luis Enrique. – GOOL24.NET
February 23, 2018 Cabdi Yare
Paris Saint-Germain ayaa bilowday inay ka shaqeyso sida ay ku heli lahayd badalka Unai Emery, iyadoo kooxda Faransiiska ah ay dooneyso inay lasoo saxiixato tababare cusub xagaaga soo aadan. Waxaana hogaaminaya liiska macalimiinta ay dooneyso tababarihii hore ee Barcelona Luis Enrique.
Warkan ayaa wuxuu imaanayaa maalmo yar kaddib marka uu soo baxay war ku aadan in Chelsea ay xiiseneyso saxiixa macalinkii hore kooxda Barcelona Luis Enrique, sababa la xidhiidhan in milkiilaha Blues ee Roman Abramovich uusan ku qanacsanayn shaqada Antonio Conte.
Kkadib markii uu dhowr jeer uu weerar ku qaaday siyaasada maamulka kooxda ee suuqa kala iibsiga iyo sidoo kale hoos u dhaca natiijooyinka kooxda ee Premier League xili ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Sport” ee dalka Spain Luis Enrique ayaa ah mudnaanta koowaad ee kooxda Paris Saint-Germain oo dooneysa inay gacanta ku dhigto macalin awood buuxda u yeelan kara maamulida kooxda PSG, waxayna u arkaan in tilmaamaha ay raadinayaan uu sito macalinka reer Spain.
Marka loo fiiriyo sida uu u soo maamulay ciyaartoyda kooxda Barcelona mudada saddexdii sano uu kusoo sugnaa, waxaana ka mid ah ciyaartoydii uu lasoo shaqeeyay Neymar Jr oo haatan ku sugan kooxda PSG.
Luis Enrique ayaan lala xiriirinin wax koox tan iyo markii uu ka tagay Barcelona dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore. Wuxuu kooxda Catalonia ku hogaamiyay seddex xilli ciyaareed uu maamulayay 9 koob uu qeyb ka yahay kan tartanka Champions League-ga iyo min laba jeer ee ah horyaalka La Liga iyo Copa del Rey.